Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo ku dagaalaya xiddig ka tirsan Paris Saint-Germain – Gool FM
Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo ku dagaalaya xiddig ka tirsan Paris Saint-Germain
Dajiye January 7, 2020
(England) 07 Jan 2020. Wargeyska “ Metro” ee dalka England ayaa ku xaqiijiyay warbixin uu daabacay maanta in kooxaha Manchester United iyo Arsenal ay u gudbiyeen dalabyo kala duwan naadiga Paris St Germain, si ay kaga soo qaataan weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani.
Edinson Cavani ayaa ciyaaray afar kulan oo kaliya horyaalka France Ligue 1 xilli ciyaareedkan, dhaawacyadiisa ayaa sababay inuu maqnaado in muddo ah, taasoo ku qasabtay PSG in qaab amaah ah ay kaga soo qaadato Mauro Icardi kooxda Inter Milan.
Qandaraaska Edinson Cavani ee kooxda Paris St Germain ayaa wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigeysa in kooxda uu doono uu ugu biiro beeca xorta ah, haddii uusan saxiixin heshiis cusub uu ku sii joogayo garoonka Parc des Princes waqtiyada soo socda.
Sida laga soo xigtay barnaamijka “El Chiringuito” ee dalka Spain Atletico Madrid ayaa kula tartameysa kooxaha reer England ee Manchester United iyo Arsenal adeega ciyaaryahankan si ay ula soo wareegaan.
Ilo wareedyo ayaa waxay intaas ku darayaan in kooxda Atletico Madrid ay xiriir la sameeysay agaasimaha ciyaaraha ee Paris Saint-Germain Leonardo Araújo, gaar ahaan maadaama uu Cavani xiiseynayo inuu ka hoos ciyaaro macalinka reer Argantina ee Diego Simeone.
Sidoo kale “RMC Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxo dhowr ee dalka England ah ay doonayaan adeega Edinson Cavani suuqa ciyaartoyda ee bishan Janaayo, waxaana ka mid ah Manchester United iyo Arsenal oo ay wehliso Chelsea.
Valverde oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya koobka Spanish Super Cup
Macalin Ole Gunnar Solskjaer oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Man Utd ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Manchester derby